सफलताका लागि महात्मा गान्धीका १० फर्मुला – Rastriyapatrika
काठमाडौं – मोहनदास करमचन्द गान्धी (महात्मा गान्धी)ले अहिंसात्मक आन्दोलनबाट भारतलाई ब्रिटिस राज्यको दबदबाबाट स्वतन्त्र बनाए । जब उनले भारतीय जनतालाई ब्रिटिसको क्रूर शासनबाट स्वतन्त्र बनाए, तब उनको नाम विश्वभरि फैलियो । गान्धीलाई शान्तिको दूतका रूपमा पनि लिइन्छ । त्यसैले आदर्शवादी गान्धीबाट आजका मानिसले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । यहाँ चर्चा गरिएको छ, उनका १० वाणीको, जुन सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यही कुरालाई अवलम्बन गर्दा मानिसको जीवनमा कायापलट आउन सक्छ :
हामी जस्तो सोच्छौँ, त्यही बन्छौँ
कहिल्यै पनि हार नमान्नु
केलाई प्राथमिकता दिने ?
लक्ष्यको बाटो पनि लक्ष्यजस्तै सुन्दर हुन्छ
कस्तो कुरामा सहमति ?
शारीरिक कि मानसिक शक्ति ठूलो ?
बलियो शरीरभन्दा दिमागको शक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । गान्धी शारीरिक रूपमा बलिया थिएनन् । तर, उनको मानसिक र इच्छाशक्तिले ब्रिटिस राज्यलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाए । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
पहिला आफूलाई बदल्नुस्
गान्धीले भनेका छन् कि अरूको नकारात्मक प्रवृत्ति हामी निकै छिटो देख्छौँ । तर, आफ्नो बारेमा ख्याल नै राख्दैनौँ । उनका अनुसार सबै व्यक्ति अद्भूत र सुन्दर हुन्छन् । त्यसैले हामीले अरूलाई मद्दत गर्न जान्नुपर्दछ । हामी अरूलाई मद्दत गर्छौं भने हामीलाई पनि अरूले मद्दत गर्न थाल्छन् । त्यसैले, सबैमा प्रेम र दयाको भावना हुन जरुरी छ । यस्तो भावनाले जीवनमा अद्भूत परिवर्तन आउन थाल्छ ।-Os Nepal